RWRooble oo Maanta bilaabaya la kulanka Musharaxiinta Mucaaradka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
RWRooble oo Maanta bilaabaya la kulanka Musharaxiinta Mucaaradka
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu wadaa in maanta kulan la qaato Mid kamid ah Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya si weyna uga soo horjeeda hanaanka Xukuumada wax ku wado.
Ilo ku dhaw dhaw Ra’isul Wasaare Rooble ayaa laga soo xigtay in maanta kulan gaar ah la yeelayo Ra’iisul Wasaare Rooble Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir sidoo kale ah Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Kulankan ayaa sida aan xogta ku helnay waxaa dalbaday Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya oo doonaya in kulamo la yeesho Musharaxiinta mucaaradka si uu ugu qanciyo doorashada la filayo in dalka ka dhacdo xalna ugu raadiyo khilaafka taagan.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan cadaadis iyo canaan kala kulmay Wakiilada Beesha Caalamka oo ku eedeeyay in uusan diyaar u aheyn la kulanka iyo qancinta Musharaxiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda hanaanka doorashada loo wado.
Midowga Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaan la ogeyn sida ay uga falcelin doonaan dadaalada uu Ra’iisul Wasaare Rooble ku doonayo in Musharaxiinta ula kulmo kuna qanciyo in ka qeyb galka doorashada aqbalaan.
Maxaa looga hadlay kulan dhexmaray Madaxweyne Deni iyo Xasan Sheekh?
Puntland oo War adeg kasoo saartay qof si bareer ah loogu dilay Garoowe